मध्यपहाडी लोकमार्ग र विकास मोडल::Online News Portal from State No. 4
पहाडै पहाड हुँदै नेपालको पूर्व–पश्चिम छिचोल्ने बाटो हो, मध्यपहाडी लोकमार्ग । १ हजार ७ सय ६५ किलोमिटर लामो यो बाटो बन्दा पहाडका बासिन्दाहरुलाई समथर भागमा झरेर मोटर चढ्न र मोटरबाट झरेर फेरि पहाड उक्लुपर्ने दुःखको अन्त्य हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको नामको फुर्को जोडिएको यो राजमार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि हो । भने अनुसार काम हुन्थ्यो भने, यतिबेला यो बाटो कालोपत्रे भइसक्थ्यो । मानिसहरु दुई लेनको पिच सडकमा सरर यात्रा गर्थे । तर, यो नेपाल न हो ! देशका २४ जिल्ला जोड्ने यो सडक बने आर्थिक सम्बृद्धिको आधार तय पनि हुन्थ्यो । बाटो बनिरहेको छ, वर्षेनी बनेको बाटो भत्केको छ । कतै बाटो कालोपत्रे भएको छ त धेरैजसो भाग धुलाम्ये नै छ । बर्खाको समयमा मध्यपहाडी लोकमार्गको यात्रा मृत्युयात्राजस्तो बन्ने क्रम पनि टुंगिएको छैन । बाटो बनाउँदै गर्दा उत्पन्न हुने निर्माण सामाग्रीको अभाव, मुआब्जा विवादले गर्दा यो परियोजनाले गति लिन नसकेको हो । परियोजना बन्दै गर्दा यो राजमार्गको वरपरको जग्गाको भाउ बढेको छ । केही ठाउँमा नयाँ बजार र बस्तीहरु बनेका छन् । विकासको लागि यो सकारात्मक थालनी हो ।
तर, मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका क्रममा केही समस्याहरु पनि देखिएका छन् । खासगरी वातावरणीय पक्षप्रति ख्याल नगर्दा यो लोकमार्गले केही विपत्तिहरु पनि निम्त्याएको छ । बाटो खन्दै गर्दा यसले पहाडको भूबनौट बिगारिदिएको छ । प्रकृतिको अनावश्यक दोहनकै कारण धेरै ठाउँमा बाढी र पहिरोको खतरा बढेको छ । अहिले लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकाबीचमा पर्ने बडीगाड खोलामा बाटो खन्दा पहाड नै झरेपछि ताल बन्नपुग्यो । अघिल्लो वर्ष बनेको सो ताललाई तुरतुरे नामाकरण गरियो । ताल बनेकोमा स्थानीयहरु हर्षित बने । त्यही ताललाई केन्द्रमा राखेर पर्यटकीय योजनाहरु बने । त्यहाँ नौकाबिहार गर्नको लागि बजेट नै विनियोजन भयो । तर,प्रकृतिको दोहनबाट बनेको यो ताल यही वर्ष मासिन पुग्यो । आइतबार रातीको वर्षासँगै आएको बाढीले तालको अस्तित्व मात्रै नामेट पारेन, लोकमार्गको पिच गरिएको बाटो नै बगाइदियो ।
बाटो बग्दा पश्चिम बागलुङका ढोरपाटन नगरपालिका, तमानखोला गाउँपालिका र निसीखोला गाउँपालिकासहित रुकुम जिल्लाको समेत बागलुङ सदरमुकाम एवं राजधानी काठमाडौंसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको छ । हेर्दा बाढीको बबण्डर देखिए पनि प्रकृतिको अनुचित दोहनले उब्जाएको समस्या हो, यो । अहिले गाउँगाउँमा बाटो बनेका छन् । उचित वातावरणीय मूल्याकन बिना बनेका बाटाहरु ज्यानमारा त छँदैछन्, त्यसले बाढी र पहिरो पनि निम्त्याएका छन् । विकासको मोडल बनाउँदा वातावरणीय सन्तुलनतर्फ ध्यान नदिँदा भएका भौतिक र मानवीय क्षतिबाट अब भने सिक्नै पर्ने भएको छ । विकासले विनास निम्त्याउँछ भने त्यस्तो विकासको कुने अर्थ रहँदैन । अत ः अहिले बागलुङसहित देशभर भएका प्राकृतिक विपत्तिबाट पाठ सिक्दै दीगो विकासको लक्ष्य हाँसिल गर्न योजनावद्ध रुपले काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।